NLD သထုံမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဒေါ်မာမာခိုင် အင်တာဗျူး > မွန်သတင်းအေဂျင်စီ
Home / ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ရေး / ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မေးမြန်‌းချက်‌ / NLD သထုံမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဒေါ်မာမာခိုင် အင်တာဗျူး
မွန်သတင်းအေဂျင်စီ September 23, 2015 ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မေးမြန်‌းချက်‌, ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ရေး Leaveacomment 176 Views
ရေးသားသူ: ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မေးမြန်‌းချက်‌
ဒေါ်မာမာခိုင် NLD သထုံမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း(IMNA)
ဖြေ-အန်တီက NLDပါတီစပြီးတည်ထောင်ကတည်းက သထုံမြို့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါခဲ့တယ်။ အမေစုရဲ့ခေါင်းဆောင်မှူကိုလည်း အရမ်းလည်းယုံကြည်တယ်။ အမေစုကို
အရမ်းလည်းလေးစားတယ်။ ဒီပါတီရဲ့မူဝါဒကိုလည်းအရမ်းကြိုက်တယ်၊ ဒီပါတီကရွေးကောက်ပွဲ ဝင်မယ်ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာလည်း အန်တီတို့အနေနဲ့က အန်တီကတရားလွှတ်တော်ရှေ့နေတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ အန်တီဥပဒေသမားတစ်ယောက်အနေနဲ့ အန်တီမှာလည်းနိုင်ငံအတွက်အမှန်တကယ်လိုအပ် နေတဲ့ဥပဒေတွေ တိုင်းပြည်အတွက်ကော ပြည်သူအတွက်ကော ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့ ဥပဒေတွေကို ပြုတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်။ဒီပြည်သူ့လွှတ်တော်လိုနေရာမျိူးတွေက ဥပဒေတွေပြုတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ အဲလိုဥပဒေတွေပြုတဲ့ဆီမှာ အန်တီတတ်နိုင်သလောက်ပေါ့နော်။ ပါတီရဲ့မူဝါဒနဲ့အညီလုပ်ဆောင်ပေးလိုတဲ့ စိတ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်အဖြစ်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရခြင်းဖြစ်တယ်။
မေး-တစ်ချို့သောပြည်သူတွေက NLD ကိုသဘောမကျတာရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဘာကြောင့် အန်တီက အပြည့်ဝယုံကြည်တာလဲ?
ဖြေ-ပြည်သူတွေသဘောမကျဘူးဆိုတာကတော့ရှိနိုင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုး။ ကိုယ်သဘောကျရင်ကျတယ်၊ သဘောမကျရင်မကျဘူးပြောနိုင်တယ်။ အန်တီတို့အနေနဲ့က ဘာကြောင့်ယုံကြည်တာလဲဆိုတော့ အန်တီမိန်းမသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ်ချင်းစားကြည့်တယ်။ အမေစုဟာသူ့ဘာသာသူ့ဘဝကို ပြည့်စုံအောင်ရပ်တည်နိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် သူအမှန်တကယ်အနစ်နာခံတဲ့စိတ်နဲ့ တိုင်းပြည်အတွက် အမှန်တကယ်ဒီမိုကရေစီထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံ ဖြစ်စေချင်တဲ့စိတ်နဲ့ သူ့ရဲ့ဘဝကိုရော၊ဆန္ဒကိုရော ၊သူ့မိသားစုဘဝကိုရော စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံခဲ့တဲ့ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့လက်ချိုးရေလို့ရပါတယ်။ ကမ္ဘာမှာ သူ့လိုအရည်အချင်းရှိတဲ့ ခေါင်းဆောင်မျိူးလက်ချိုးရေလို့ရတဲ့အနေအထားမှာ ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာကိုယ့်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင် အမေစုတစ်ယောက်ရှိနေခြင်းဟာ အန်တီတို့အတွက်နိုင်ငံအတွက်အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ရတနာတစ်ပါးဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒေါ်စုကိုယုံကြည်ပါတယ်။ ပြီးတော့သူချမှတ်ပေးလိုက်တဲ့လမ်းစဉ်ဟာ ဆိုရင်လည်း ပြည်သူလူထုအားလုံးအတွက် တစ်ပြေးညီဖြစ်သွားမယ်။ ပါတီဝင်တိုင်းမှာဆင်းရဲချမ်းသာ အနိမ့်အမြင့် မရွေးပါဘူး။စည်းကမ်းပိုင်းမှာလည်း အရမ်းတိကျပါတယ်။ အလုပ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သတ်ရင်လည်း သူကိ်ုယ်တိုင်စံ နမူနာဖြစ်အောင် အမြဲတမ်းအသက် ၇၀ အရယ်ရောက်နေပြီးဆိုပေမယ့် လူငယ်တစ်ယောက်ပမာ ဖြတ်ဖြတ်လတ်လတ် သွက်သွက်လက်လက် စိတ်နှစ်ပြီးလုပ်ပေးနေတဲ့သူ့ရဲ့ဇွဲသတ္တိကိုယ်လည်း အရမ်းလေးစားအားကျတယ်။ သူ့ရဲ့စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့အရည်အချင်းကိုလည်း ယုံကြည်တဲ့အတွက် ဒေါ်စုရဲ့ ခေါင်းဆောင်မှူကိုတစ်စိုက်မတ်မတ်လိုက်နားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။
မေး-လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ မွန်ပြည်နယ်အတွက်ဘာတွေ လုပ်ဆောင်ပေးသွားဖို့ရှိပါသလဲ?
ဖြေ-မွန်ပြည်နယ်အတွက်လို့ပြောတာနဲ့စာရင် အန်တီတို့ကတစ်ပြည်လုံးအတွက်လို့ပြောချင်တယ်။ မွန်ပြည်နယ်အတွက်ဆိုရင်ဒေသစွဲလိုဖြစ်နေမှာစိုးလို့ပါ။ တစ်ပြည်လုံးအတိုင်းအတာနဲ့ တစ်ပြည်လုံး လိုအပ်နေတဲ့ဥပဒေတွေရှိတယ်။ ခေတ်နဲ့စနစ်နဲ့မလျော်ညီတော့တဲ့ဥပဒေတွေရှိသလို ဟိုတုန်းကပြဌာန်း ခဲ့တဲ့ပြည်သူကို တစ်ဖတ်သတ်ဖိနှိပ်ရာကျတဲ့ဥပဒေတွေရှိနေတယ်။ အဲဒါတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးမယ်။ ပြီးတဲ့အခါကျတော့ အန်တီတို့ NLD ပါတီရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ပေါ့။ အဲဒါဘာလဲဆိုတော့ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်းအကောင်အထည်ဖော်ပေးမယ်လို့အန်တီစဉ်းစားထားပါတယ်။
ဖြေ-ဒီမှာဆိုရင်တော့နှစ်ပိုင်းရှိမှာပေါ့နော်။ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ပတ်သတ်လာလို့ရှိရင်တော့ မွန်ပြည်နယ်ရဲ့ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကမဆိုးပါဘူး၊ အခြေနေကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဘာတွေလိုနေသလဲဆိုတော့ ဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့ဒေသတွေမှာပေါ့နော်၊ ပညာရေးနဲ့ပတ်သတ်ရင်အားနည်းချက်တွေ အများကြီးရှိတယ်။ အန်တီတို့ရွာတွေဘက်ဆင်းတဲ့အခါကျတော့ ဒီကျောင်းတွေကို မူလွန်ကျောင်းတို့ အလယ်တန်းတို့ ထူထောင်ပေးထားတာ တောင်မှအဲဒီမှာစာသင်ပေးဖို့ အလယ်တန်းဆရာမတွေနိုင်ငံတော်က မချမှတ်ပေးနိုင်ဘူး။ ကျောင်းတော်တော်များများမှာဆိုရင်အဲဒီလိုပဲ ကျောင်းရှိတယ်၊ ဆရာ၊ဆရာမ မလုံလောက်ဘူး။ အဲလိုမျိူးတွေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ အဓိကကတော့တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ရဲ့ လူငယ်တွေ တိုးတက်မှူဟာလည်းပညာရေးကအဓိကပဲ။ ပညာရေးပိုင်းမှာတော့အားနည်းချက်တွေရှိတယ်။ ပြီးတဲ့အခါကျတော့ ရွာတွေဆက်သွယ်တဲ့လမ်းတွေမှာ အခက်ခဲတွေအများကြီးရှိတယ်။ တစ်ချို့ရွာတွေဆိုရင် အန်တီတို့စည်းရုံးရေးခရီးစဉ်အတွက်သွားတဲ့နေရာမှာ တော်တော်လေးကို အခက်ခဲ ဖြစ်တာတွေရှိတာပေါ့နော်။ အဲဒါတွေဖြစ်စေချင်တယ်။ နောက်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍနဲ့ပတ်သတ် လာလို့ရှိရင် ဒေသတိုင်းမှာပေါ့ဆေးရုံ၊ မရှိရင်တောင်မှ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းလောက်တော့ ရှိစေချင်တယ်။ ဥပမာပေါ့ အန်တီတို့ဒီပင်လယ်ရွာတွေဖြစ်တဲ့ အောင်ကန်သာတို့ဆိုလို့ရှိရင် ကျန်းမာရေး အတွက်တစ်ခုခုလိုအပ်လို့ရှိရင် ကျန်းမာရေးဆရာမတွေရှိတယ်ဆိုပေမယ့် ဝေးလံတဲ့အတွက် ဆရာမတွေ အမြဲတမ်းရှိမနေနိုင်ဘူး။ ဒီဘက်ကကျောက်တောင်ရွာတွေဘက်မှာဆိုရင်လည်း ဒီအတိုင်းပဲ။ ကျန်းမာရေး ဆေးပေးခန်းလဲမရှိဘူး။ ဝေးလံတဲ့အတွက်ဆရာမလည်း အမြဲတမ်းမနေနိုင်ဘူး။ အဲဒီလိုနေရာမျိူးလေး တွေပေါ့နော်။ နောက်ဆုံးကျန်းမာရေးဆရာမ ဆရာဝန်မဟုတ်ရင်တောင်မှ ကျန်းမာရေးလုပ်သားတွေ အနေနဲ့ ရှိသင့်တယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်။ အဲဒီလိုဟာမျိူးတွေလုပ်ပေးချင်တယ်။ ပြီးတော့အခုနကပြောတဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအပိုင်း။ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအပိုင်မှာတော့ အန်တီတို့သထုံမြို့နယ်အနေနဲ့တွက်မယ် ဆိုရင် တရားရုံးပိုင်းတွေက အဲလောက်ကြီးဆိုးဆိုးဝါးဝါးတော့မရှိဘူး။ ဒါပေမယ့်ဘာတွေရှိသလဲဆိုရင်တော့ တရားစီရင်တဲ့နေရာမှာတော့ အထက်အမိန့်စောင့်ရတာတော့ရှိနေတုန်းပဲ။ အဲဒီတော့တရားဥပဒေ အထက်မှာဘယ်သူမှမရှိစေရဘူးဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်ကိုလည်း အန်တီတို့အနေနဲ့အပြည့်အဝ အကောင်ထည် ဖော်ဖို့ကြိုးစားမယ်။
မေး-လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါ အခုပြောသွားတဲ့ကိစ္စတွေထဲက ဘယ်ဟာကိုဦးစားပေးလုပ်ဆောင်သွားမှာလဲ?
ဖြေ-အန်တီသထုံမြို့နယ်အနေနဲ့တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အကန့်နဲ့သူတော့ရှိတာပေါ့နော်။ အန်တီအနေနဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ထဲကိုရောက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင် ဒီဒေသတိုင်းမှာရှိတဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေက ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတဲ့ ကဏ္ဍတွေကို ဦးစားပေးတယ်လို့ရယ်မဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တစ်ပြိုင်တည်း တကယ်လည်းလွှတ်တော် ထဲမှာအမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒါတွေလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အချိန်တိုတိုအတွင်းမှာ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရည်အသွေးရှိအောင်လည်း အန်တီတို့ခေါင်းဆောင်ကနေပြီးတော့ အန်တီတို့ ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုထိန်းကျောင်းပေးမယ်လို့လည်းအန်တီယုံကြည်တယ်။ အန်တီတို့ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးကလည်း သူထိန်းကျောင်းတဲ့အတိုင်း သူ့ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှူအောက်မှာ အမှီလိုက်ပြီးတော့ အခုနကပြောတဲ့အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကို အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီလုပ်သွားမယ်လို့ စဉ်းစားထားပါတယ်။
မေး။ ။အန်တီတို့ပါတီက ဘယ်လိုမူဝါဒလမ်းစဉ်တွေချမှတ်ထားတာရှိလဲ
ဖြေ။ ။NLD ပါတီကဘယ်လိုမူဝါဒလမ်းစဉ်တွေချမှတ်ထားတာရှိသလဲဆိုတော့ NLDပါတီက ပြည်သူလူထုကိုအခြေပြုတဲ့ပါတီဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခြားရှည်ရှည်ဝေးဝေးမပြောချင်ပေမယ့် NLD ပါတီက အမေစုအနေနဲ့ကတိခြောက်ချက်ပေးထားတာရှိတယ်။ အဲဒီမှာအဓိကအကျဆုံးအချက်နှစ်ချက်ကိုပဲ ပြောချင်ပါတယ်။ ပြည်သူလူထုကရွေးကောက်တင်မြှောက်လိုက်လို့ NLD ကအစိုးရဖွဲ့ပြီးတဲ့အခါကျရင် ပြည်သူကမကြိုက်ပါဘူး၊မနှစ်သက်ပါဘူးလို့ပြောလို့ရှိရင် NLD ပါတီကလက်နက်ကိုဖက်တွယ်ပြီးတော့ ဘယ်တော့မှအာဏာမဆုပ်ကိုင်ထားပါဘူး။ နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာ အုပ်ချုပ်တဲ့နေရာမှာလဲ အဂတိတရားကင်းရှင်းအောင် အတတ်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်၊ NLD ပါတီကနေပြီးတော့ အစိုးရအဖွဲ့မှာတကယ်သန့်ရှင်းတဲ့အစိုးရ ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရဖြစ်အောင် အဂတိလိုက်စားခြင်းဆိုတဲ့ ကိစ္စတွေကိုလုံးဝမလုပ်ပါဘူးဆိုတဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုတော့ အာမခံပေးထားတယ်။ခြောက်ချက်ထဲမှာ အဲဒီနှစ်ချက်က ပြည်သူလူထုအတွက်အဓိကျလိမ့်မယ်လို့ အန်တီထင်ပါတယ်။
မေး-မဲဆန္ဒရှင်တွေကို ပြည်သူကနေတစ်ဆင့် ဘာများမှာကြားချင်ပါသလဲ?
ဖြေ-ဘာမှာကြားချင်သလဲဆိုရင်တော့ အန်တီတို့ NLD ရဲ့ဆောင်ပုဒ်ပေါ့နော်။ အမှန်တကယ်ပြောင်းလဲဖို့ အချိန်တန်ပြီး၊ အမှန်တကယ်ပြောင်းလဲဖို့ NLD ကိုမဲပေးစို့ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်အတိုင်းပဲ နိုင်ငံမှာအန်တီတို့က ပြောရမယ်ဆိုရင်အန်တီတို့က ဒီနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ အစိုးရအဆောက်အအုံဖြစ်တဲ့ဒီအမိုးကြီးတစ်ခုလုံးကို ပြောင်းလဲဖို့ အချိန်တန်ပါပြီး။ အဲဒီအခါကျတော့ ကျန်တဲ့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစုတွေကိုရော ကျန်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုရော မိမိနေရာလေးသာ ကွက်ပြီးလုပ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်၊ ခေါင်မိုးကိုဖာတာနဲ့ပဲတူပါလိမ့်မယ်။ အန်တီတို့ NLD မှာကျတော့ ဒီခေါင်မိုးကြီးတစ်ခုလုံးကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့အတွက် သွပ်တွေလဲရှိပါတယ်၊သံတွေလဲရှိပါတယ်၊ သစ်တွေလဲရှိပါတယ်၊ စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့လက်သမားတွေလဲရှိပါတယ်။ လူငယ်ပညာရှင်တွေလဲ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒီအမိုးကြီးတစ်ခုလုံးကိုပြင်နိုင်မှသာ ဒီအိမ်လေးဟာတိုးတက်ကောင်းမွန်မှာဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေအားလုံးပေါ့နော်၊ အမှန်တကယ်ဒီအမိုးကြီးကိုပြုပြင်ခွင့်ရဖို့ အတွက် NLD ကိုမဲပေးကြပါလို့အန်တီအနေနဲ့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မေးမြန်‌းချက်‌ 2015-09-23
Tags ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မေးမြန်‌းချက်‌
Previous ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်ကို မကျေနပ်၍ ဆူပူမှုများဖြစ်ပွားလာလျှင် ဥပဒေအရလုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု တပ်ချုပ် ပြော
Next မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၂၀၁၅ ခုနှစ် ပါတီစုံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ